१५ किलो सुन कसरी भयो चाँदी ?
प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई हटाउने अधिकार छैन : नेता नेपाल
विविधतायुक्त संस्कृतिकै कारण नेपाल विश्वभर चिनियो : राष्ट्रपति
मुख्य पृष्ठपत्रपत्रिकामा आज१५ किलो सुन कसरी भयो चाँदी ?
शुक्रबार, १६ साउन, २०७७ 0प्रतिक्रिया
विराटनगर, १६ साउन । प्रहरीले काठमाडौंको कमलादीमा सुरक्षा जाँच गरिरहेको थियो । त्यही बेला बा.६च ५५१९ नम्बरको सेतो रङको स्कर्पियो प्रहरीले रोक्न खोज्यो ।
तर गति बढाएर गाडी भाग्यो । प्रहरीले पिछा ग¥यो । त्यसको सुइँको पाएपछि कपडाको झोला फ्याँकेर गाडी भागेको प्रहरीले जनाएको थियो ।
यो घटना गत मंगलबारको हो । तत्काल काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलन गरी १५ किलो सुनसहित हतियार फेला पारेको जानकारी दिए ।
तर, प्रहरीले सुन भनेको धातु पछि जाँच गराउँदा साढे १४ किलो चाँदी पुष्टि भयो , आधा किलो मात्र सुन भएको प्रहरीले बतायो ।
प्रहरीको कडा सुरक्षा भएको ठाउँबाटै गाडी कसरी उम्कियो ? यसमा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । प्रहरीकै मिलेमतो भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
उक्त घटनाको छानबिन गर्न महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी दीपक थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो ।
तर, काठमाडौं प्रहरी प्रमुख ज्ञवाली र अपराध माहाशाखा प्रहरी प्रमुख थापाबीच समन्वय अभावका कारण दोस्रो दिनमै समिति संयोजक फेरिए ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रवक्ता एसएसपी सुनीलकुमार यादवलाई संयोजक बनाइयो ।
लुटपाटको १० लाख नगदसहित न्युरोडबाट घुमुवा प्रहरीसहितलाई पक्राउ गरेको घटनाको जस कसले लिने भनेर ज्ञवाली र थापाबीच हानथाप रहेछ ।
त्यही विषयमा उनीहरूबीच समन्वय अभाव थियो । त्यसैले ज्ञवालीको आग्रहमा समितिको संयोजक परिवर्तन गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
एसएसपी यादव नेतृत्वको समितिले मंगलबारको घटनामा प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतको त्रुटि रहेको देखाएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार अनुसन्धान अधिकृत डीएसपी रञ्जन दाहालले नक्कली घटनास्थल देखाएर प्रहरीलाई गलत सूचना दिई अनुसन्धानमा गम्भीर लापरवाही गरेको देखिएको छ ।
डीएसपी दाहालले उम्किएको गाडीको गलत नम्बर ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको पाइएको छ । उनले ५५१९ हुनुपर्नेमा ५५११ बताएका थिए ।
आफूलाई पनि गाडी भागेपछि मात्र डीएसपी दाहालले जानकारी दिएको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
समिति स्रोतका अनुसार प्रहरीलाई दिइएजस्तो घटना विवरण कमलादीमा रहेको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको छैन । अनुसन्धानबाट नयाँ घटनास्थल सुन्धारा भएको कुरा खुलेको छ ।
स्रोतका अनुसार ‘क्राइम सिन’ परिवर्तन गर्नु, ट्राफिक प्रहरीलाई गाडी नम्बर गलत टिपाउनु, जलप लगाएको वस्तुलाई जाँच नगरी सुन भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्नु, काठमाडौंका अन्य प्रहरी वृत्तमा समन्वय नगर्नु प्रहरीको मुख्य लापरवाही देखिएको छ ।
उक्त घटनाको तेस्रो दिन बिहीबार सुन काण्डका तीन अभियुक्त पक्राउ परेका छन् भने गाडी पनि फेला परेको छ ।
देवान पटेल, निलेश सखिया र विजय पटेल नवलपरासीको दुम्कीबाट पक्राउ परेका हुन् ।
उनीहरू चेकपोइन्ट कमलपोखरीबाट गाडी लिएर भागेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सुन्धारामा पुग्दा झोला फ्याँकेर ललितपुर नखिपोटमा गाडी छोडी नागढुंगा पुगेका थिए ।
काठमाडौंमा बिरामी ल्याएर बुटवल फर्किंदै गरेको ट्याक्सीलाई मनकामना जाने भनी चढेर भैरहवा पु¥याएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
त्यसपछि प्रहरीले दिएको हुलियाका आधारमा नवलपरासीको दुम्कीबाट ट्याक्सीसहित पक्राउ परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
नखिपोटमा भेटिएको गाडी भने बारा घर भएका इलसाम हुसेनको नाममा रहेको पाइएको छ ।
पक्राउ परेका व्यक्ति र घटनामा प्रयोग गरिएको गाडीबारे विस्तृत छानबिन भइरहेको महानगरीय प्रहरी प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोख्रेलले बताए । घटनामा लापरवाही गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने उनले बताए ।
दरबारमार्गका डीएसपी दाहाल बिहीबार प्रहरी प्रतिष्ठानमा तानिएका छन् ।
सुन काण्डमा लापरवाही गरेका र छानबिनलाई प्रभावित गर्न सक्ने भनेर उनलाई प्रतिष्ठानमा तानिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले जनाएको छ ।
दाहालको ठाउँमा प्रतिष्ठानका डीएसपी रामेश्वर पौडेललाई ल्याइएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ